I-Holland | Itafile yesayensi | UPhando kunye noPhuculo
E-Holland sibona ukubaluleka kophando kunye nokusebenzisana nabathengi kunye namaqabane ezenzululwazi ngokufanayo. Oku kunceda ukuphuculwa kweemveliso ezintsha, eziqinileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni ezibonelela ngokunyuka kwezixhobo zobomi kunye nezibonelelo zokusebenza kwintsebenzo yethu.
Njengenxalenye yenkqubo yethu eqhubekayo yokuphucula senza iSayensi yeTafile®Iprojekthi yoPhando nge-Anti-Stick (i-TSAR) kunye neYunivesithi yaseLottingham yeLebhu yeBiophysics kunye noPhononongo lomphezulu. Oku kusinceda ukuba siqonde impembelelo yeeparameter ezininzi ezintsonkothileyo kwizinto ezaziwayo zokuncamathela kunye nee-API eziza kukhokelela ekudalweni 'kokukhethwa ngokufanelekileyo kokugquma' ngokusekwe kwinzululwazi yokuqina kwetafile.
Itafile yesayensi yeThebhile
I-Holland ibisemaphethelweni wokusika itekhnoloji yezixhobo zetafile iminyaka engama-70. Ngokusebenzisana nophando kunye namaziko ezobuchwephesha siqhubeka nokuphanda ngesayensi esetyenziselwa ukusebenzisa iethebhulethi kwisicelo sethu sokufumana isisombululo esisisigxina kunye nexabiso elifanelekileyo kwimicimbi echaphazela wena njengomvelisi wethebhulethi.
Iqela lethu le-R & D lisebenza ngokubambisana nabathengi bethu kunye noososayensi abakhokelayo kumaziko ophando kunye nezorhwebo, ezinye zidweliswe apha ngezantsi. Sisoloko sifuna ukutyhila iinyani ezisemva kwethebhulethi, sincedisa ekunciphiseni iingxaki eziqhelekileyo ezinjengokuncamathela, umhlwa kunye nokunxiba okugqithileyo.
Ukongeza kwindlela yethu yokusombulula ingxaki kwi-R & D sihlala sijonga kwaye siphicotha ukusebenza kweenqindi zethu kwaye sife ngokwenkqubo yethu yovavanyo.